Ny zavatra rehetra fantatsika momba ny 'satro-boninahitra' Season 3 - News
Ahoana No Fahalalana & Fanabeazana Mpahay Nahatratra Fitaizana Celeb Style Fanamarihana Momba Ny Sarimihetsika Fahasalamana Ao An-Tokantrano Drafitra Sy Torohevitra Pets
Nahazo daty famoahana fotsiny ny ‘satro-boninahitra’ ... Plus Ny zavatra hafa rehetra fantatsika momba ny vanim-potoana 3
Azo antoka fa efa nijery ny lalan-kaleha isika Ny satro-boninahitra fizarana faharoa (indroa…), saingy ny vanimpotoana telo dia vanim-potoana hahatonga antsika hiatrika ity fisintahana mahatsiravina ity.
Raha mbola tsy nanambara zavatra betsaka momba ny Netflix Ny satro-boninahitra ’S vanim-potoana fahatelo ho avy, tsy maintsy mampitandrina isika fa mpikambana sasantsasany vitsivitsy amin'ny O.G. mpilalao dia tsy hiverina amin'ny hazakazaka zandriny amin'ny seho. (Makà fofonaina lalina ary avelao hilentika io.)
Ity no fantatsika momba ny vanim-potoana, ny daty premiere, ny mpilalao vaovao ary ny (gulp) fanoloana an'i Claire Foy (Queen Elizabeth) sy Matt Smith (Prince Philip) tamin'ny fizarana fahatelo.
Ny daty premiere
Netflix dia nanambara an'io vanim-potoana fahatelo an'ny Ny satro-boninahitra premiere amin'ny 17 novambra, ka esory ny fandaharam-potoananareo, tompokolahy sy mpikarama.
Ny vanim-potoana voalohany dia atao amin'ny faramparan'ny taona 40 sy voalohan'ny taona 50, ary fizarana faharoa mitranga amin'ny taona 50 sy ny voalohan 'taona 60. Hanao ny fizarana fahatelo voalaza afovoany tamin'ny taona 1964 ka hatramin'ny 1976.
Isaky ny vanim-potoana mitranga amin'ny vanim-potoana hafa, dia voatery hitranga izany, saingy tsy manamora ny fanamorana izany. Ilay malalantsika Foy hanantona ny satroboninahiny ho mpanjakavavy Elizabeth ary hanome ny tehim-panjakana ho an'ny mpilalao sarimihetsika anglisy Olivia Colman ( Broadchurch ) mandritra ny vanim-potoana telo sy efatra.
Ilay Andriambavy Margaret maditra dia tsy ho asehon'i Vanessa Kirby intsony. Fa kosa, Helena Bonham Carter hiditra an-tsehatra. Ary Prince Prince? Tobias Menzies hisolo an'i Smith.
Josh O'Connor ( Florence Foster Jenkins ) sy Marion Bailey ( Mpiray Dina ) handray ny andraikitry ny Printsy Charles sy ny renim-pianakaviana. Ny mpilalao dia hisolo toerana an'i Julian Baring sy Victoria Hamilton, izay nitana ny anjara asany avy tamin'ny fizarana voalohany sy roa.
Anwar Hussein / Getty Images & Chris Jackson / Getty Images
Ireo endrika vaovao
Ny satro-boninahitra nanamafy ireo mpamokatra vidina denaria Emma Corin dia hampiseho an-dRavehivavy Princess farany amin'ny fizarana fahatelo. Na dia manana ampahany kely amin'ny vanim-potoana fahatelo aza ny toetran'ny Lady Diana Spencer, voalaza fa handray andraikitra lehibe amin'ny andiany fahefatra (ary koa ny vanim-potoana fahadimy mbola tsy voamarina) ilay andriambavy.
Ny fanampiana iray ho an'ireo mpilalao izay tena nahaliana anay indrindra dia ny Fampianarana momba ny firaisana Gillian Anderson ho 'Lady Lady' Margaret Thatcher. I Anderson dia hilalao an'i Baroness tara rehefa mitety ny politika izy ary farany dia lasa praiminisitra naharitra indrindra tamin'ny taonjato faha-20 ary vehivavy voalohany nitana io birao io.
Ho fanampin'ny Princess Anne, izay efa noresahintsika teo aloha, dia asehon'i Doherty, hisy ihany koa ny mpilalao Camilla Parker Bowles izay hotanan'i Antsoy ny mpampivelona Emerald Fennell.
Tena mihoatry ny volana tanteraka aho, ary raiki-tahotra tanteraka, hiaraka amin'ny olona manan-talenta marobe Ny satro-boninahitra , Hoy i Fennell TVLine . Tena tiako tokoa i Camilla ary feno fankasitrahana aho fa ny taonan'ny fahatanorako dia nanomana ahy tsara hilalao snogger serial-fifohana sigara miaraka am-bolo volo.
Mendrika ny fiandrasana? Eny tokoa, ry malalako.
fampiofanana tsara indrindra ho an'ny tavy kibo
Mifandray : Famerenana ‘The Crown’ Season 2: Isaky ny Episode Juicy
Tatitra fanampiny nataon'i Roberta Fiorito
Sokajy Celeb Style Beauty Bridal Asa Sy Vola
i Adama sandler Drew Barrymore
ravaky ny fandriana voninkazo ho an'ny alin'ny fampakaram-bady
maharitra ela fantsika poloney
fanatanjahan-tena handoro tavy kibo
fanatanjahan-tena hampihenana ny tavy kibo ho an'ny vehivavy
haircuts ho an'ny tarehy lavalava sy volo mikotroka
sarimihetsika hijerena ny namanao